एमएस थापाले किन बोले झुठ !
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अध्यक्ष एमएस थापा गत १० चैतमा मन्त्री पदको सपथ लिएको डेढ महिने कार्यकाल पूरा गरि अवकाश पाएपछि उनको अन्तरवार्ता ‘राज्यसत्ता डटकम’ अनलाइनमा प्रकाशन भयो । जातीय संघीयता एमाओवादीसहित राजमुपाको साझा वटमलाइन भएको उनको अन्तरवार्ताको सार रहेको छ ।
पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज एमाओवादी लाइन्मा गाभिएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप पार्टी पंक्तिमा वहसको थालनी गर्दा निर्वाचित सदस्यलाई निश्कासन गरे, अध्यक्ष थापाले । ३ देखि ५ वैशाख २०६८ को पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनोनित आरक्षण कोटामा मनोनयन नगर्ने नीति वनायो । वैचारिक समस्याको समाधान उनले पार्टीवाट निश्कासन गरिनु नै उत्तम विधि ठाने । यो नितान्त प्राविधिक विधि हो । वैचारिक प्रतिवादमा नआउनेहरुलाई संघीय परिषद सदस्य पद हिजो आज बाँड्दै हिडेका छन् । उनले आफनो सम्पूर्ण समय यसैमा खर्चेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार डा. वावुराम भट्टराईलाई मतदान गर्ने क्रममा एमाओवादीसँग राजमुपाको वैचारिक निकट भएको व्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक घोषणा अध्यक्ष थापाले गरे । मतदान पनि यसै आधारमा गरे । पार्टीलाई एमाओवादीमा विलय गराएको घोषणा अध्यक्ष थापाले गरेपछि इमान्दार कार्यकर्ता आश्चर्य चकित परे । तर, पार्टीको उमेर २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी जनतामा नपुगेको कारण जनताले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अवस्था रहेन ।
गत माघको दोश्रो सातातिर वुटवलमा सम्पन्न पार्टीको संघीय परिषद वैठकले भट्टराई सरकारको समर्थन फिर्ता लियो । गत ८ चैतमा राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न एमाओवादीको वैद्यपक्षसहित विभिन्न १२ साना दल तथा जातीय संगठनहरुको साझा मोर्चामा राजमुपा पनि समाहित भयो । तर, दुई दिनपछि सरकारप्रतिको राजमुपाको दृष्टिकोणमा एक्कासी परिवर्तन आयो र आन्दोलनको मोर्चा पार्टीले त्याग्यो । चैत १० गते अध्यक्ष एमएस थापा सरकारमा सामेल भए । यो पनि वहसको एक कडी भएको छ ।
अध्यक्ष थापाको मन्त्रीकार्यकालमा ३ देखि ५ वैशाख २०६९ मा ३ दिने ‘नेपाल वन्द’को कार्यक्रम पार्टीले घोषणा ग¥यो । ‘वन्द फिर्ता नलिए मन्त्री वर्खास्त’ शिर्षकमा आइतवार ३ वैशाख, २०६९ को ‘नागरिक दैनिक’ भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई वन्द फिर्ता नलिए मन्त्रीवाट निकाल्छु’, ‘वन्द फिर्ताको लागि पार्टीलाई मनाउन पहल गर्छु’, ‘वन्द फिर्ता नभए मन्त्री निवास छाडेर आफ्नो घरतिर लाग्छु’ । यी हुन् प्रधानमन्त्री भट्टराईको कडा अल्टिमेटम र मन्त्री थापाको प्रतिजवाफ । अन्ततः थापाले ‘नेपाल वन्द’ त्यागे र मन्त्री पद रोजे ।
पार्टीको चौथो महाधिवेशनको अध्यक्ष थापाको चुनावी प्रचारप्रसार आफु खाँती गणतन्त्रवादी र खपांगी राजावादी थियो । जवकि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कठोर कदमको समर्थन अध्यक्ष थापाको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । यसपटकको थापाको मन्त्रीकालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नियूक्त गरेको पूर्व अञ्चल प्रशासक ललितवहादुर थापामगर मन्त्री थापाको अवैतनिक स्वकीय सल्लाहकार पदमा नियूक्ति पाए । नियूक्ति प्रकरणमा उनी निकै विवादमा फसे ।
संघीयता विरोधीहरुको पुत्ला जलाउनेजस्ता दोश्रो चरण अन्तरगतको संघर्षको कार्यक्रम पार्टीको रह्यो । यो नेपाल वन्द कार्यक्रमको संशोधित संघर्षको स्वरुप हो । नेपाल वन्द कार्यक्रमको कारण प्रधानमन्त्रीवाट झापड खाएपछि सरकारलाई नछोइकन राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता स¥साना पार्टीको विचारमाथि राजमुपा जाइलाग्यो । संशोधित दोश्रो चरणको कार्यक्रमले पनि अध्यक्ष थापामाथिको अपजस मुक्त गर्न सकेन । व्यवस्थापिका संसदभित्रै सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत राजमोमाथि आउने सम्पूर्ण दुश्परिणाम अध्यक्ष एमएस थापाको थाप्लोमा थोपरे, अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले ।
एमाओवादी, नेका, एमाले र संयूक्त मधेसी मोर्चावीचको सहमतिवमोजिम प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वरुपको सरकार वनाउन मातहतका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिए । राजिनामा दिनेमा अध्यक्ष एमएस थापा पनि एक हुन् । ठूला दलहरुको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल गठन भैसक्यो तर, अध्यक्ष थापाको मन्त्री पद खुस्केको धेरै दिनसम्म मन्त्री क्वाटरमै पालो पर्खे । नेपाल परिवार दल र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीवाट एकएक मन्त्री पाइसकेपछि वल्ल पालो नआउने कुरा वुझे, एमएस थापाले । मुश्किलले मन्त्री क्वाटर छाडे, पूर्व मन्त्री थापाले । यो पनि रोचकलाग्दो कुरा हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तरगतको आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले ७ देखि ९ जेठ २०६९ को ३ दिने ‘नेपाल वन्द’ आह्वान ग¥यो । उक्त नेपाल वन्दमा राजमुपाको घुसपैठ भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले वदनामपूर्ण ढंगवाट उल्लेख ग¥यो ।
राज्यसत्ता डटकमको अन्तरवार्तामा पार्टी जातीय संघीयताको पक्ष वा विपक्ष के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘भूमि होइन जातिको मुक्तिको पक्ष । मगरात, थरुहट, लिम्वुवान .....दिएर मात्र हुदैन । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्रमा छ ।’ यो भनाई उनले चपाएर वोलेका छन्, कार्यकर्तामाथि भ्रमजाल फिजाएका छन् । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्र जातीय संघीयताको पक्षमा छैन । सच्चा वुझाई यहि हो ।
त्यसैगरी, प्रदेशको संख्या कति हुनु उपयूक्त छ भन्ने जवाफमा भन्छन्, ‘राज्य पुनः संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश ठीक छ । एमाओवादीको प्रस्ताव पनि केहि हद ठीक छ ।’ यो विचारले प्रष्ट पार्दछ थापा जातीय संघवादी हुन् र पार्टीलाई पनि यहि वाटोमा हिडाएका छन् । मगरातको पक्षमा उभिनु भनेको जातीय संघवादी लाइन् हो । यो सरासर भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन । राजमुपाको इतिहासमा पार्टी भूमिमुक्तिको वाटोमा थिएन जो अहिले छ । यहि कुरा कार्यकर्ताले वुझ्न सकेका छैनन् ।
खपांगीलाई अध्यक्षपछि वरिष्ठ दिनखोजेको भन्ने अन्तरवार्तामा थापाको दावी छ । यो भनाई शतप्रतिसत झुठ्ठा हो । पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनानयन नगर्ने निर्णयवाट पार्टी निश्कासन गरिसकेपछि कसरी वरिष्ठको कुरा आउछ ? यो वेइमानी र भ्रमजालवाहेक अरु केहि होइन ।
खपांगीसँगको व्यक्तिगत टकराव हो वा वैचारिक भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘धर्मनिरपेक्षता भर्सेज धार्मिक स्वतन्त्रता, जातीय संघीयता भर्सेज विकासको लागि संघीयता र संघीय गणतन्त्र भर्सेज घुमाउरो संवैधानिक राजतन्त्र हुनुले वैचारिक टकराव हो, व्यक्तिगत टकराव होइन ।’ अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षता पश्चिमा शक्तिको दवावमा आयो । यसमा वौद्धिक वहस वाँकि छ । जातीय मुक्तिको रणनीति गणतन्त्र या संवैधानिक राजतन्त्रसँग कुनै सम्वन्ध हुदैन । यो राजनीतिक ‘फिलोसफी’को कुरा हो । जातीय संघीयता भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन ।
१२ जेठ २०६९
Last Updated on Thursday, 05 March 2015 23:22
नेपाल पछि परेको शासकहरु एक्लै हिड्नाले अनि एकल शासन लाद्नाले
प्रकृतिको सुन्दर देश नेपाल जहाँ बिश्वमा नभएका धेरै मनोरम हिमाल, पहाड़, तराई, बन, जंगल अनि बिभिन्न जातजाती, धर्म, भाषा र संस्कृतिहरुले भरी पुर्णछ मानौ नेपाल एउटा शयौ फुलहरुको बगैचा हो तर जब कथा कथित एकाताको शुत्रपात भो तब नेपालको त्यो सौदर्यतामा एक किमिसको बलात्कार को शुत्रपात भयो । बलात्कार यस कारणकी त्यस बेला देखि बिभिधता लाई एक पछि अर्को गर्दै पुर्ण रूपमा नेष्तेज र प्रतिबन्ध गर्दै लगियो । बिभिधताको बगैचा लाई निमोठियो, भिन्न बिचार, भाषा, धर्म र संस्कृती भएकाहरुलाई क्रमबद्द रुपमा उन्मूलन को निति अख्तियार गरियो । अनि २४० वर्ष भन्दा बढ़ी एक पछि अर्को गर्दै शासन र शासकहरु त परिवर्तन भए, केवल अनुहार फरक तर भाषा, जात र बिचार उही सन्कुचित भएकाहरु जस्ले त्यही एकल शासन र प्रबिर्ती निरन्तरता दिदै लगे परिणाम आज देश मागीखानेमा परिणत भएकोछ ।
धेरै आन्दोलनहरु भए, उपलब्धिहरु पनि भए र शाशन ब्याबस्थाहरु पनि धेरै बदलीए तर ती परिवर्तन केवल शाशकहरु मै सिमित रह्यो । प्रजात्रन्त्र पनि आयो र अहिले लोक तन्त्र पनि छ तर अझै पनि त्यो परिवर्तन साधरण जनता सामु पुग्न सके, छैन, छ त केवल मुठ्ठी भरका नेताहरुको लागी र उही शासकहरुको लागी मात्र । नयाँ ब्याबस्था र नेताहरु त धेरै आए तर अझै पनि सोचमा परिवर्तन छैन र सदिऔकाल देखि पीड़ित आदिवासी, सीमान्तकृत, दलित,र मधेसीहरुलाई नेपालको मुल धारमा ल्याउने छाटकाट छैन ।
आन्दोलनको समयमा नेताहरु ठुला ठुला कुरा गर्छन र जब उनिहरु सिंगदर्बारको गेट भित्र छिर्छन त्यस दिन देखि कहिले पछि फर्केर हेर्दैनन उनिहरु अनि भुल्छन सारा बचन र बाधाहरु । तर पनि हामी जनताहरु चुपचाप सहेर बसेकाछौ ख़ासगरी आदिवासीहरु आफ्नै थाक थलो, धर्म संस्कृती अनि आफ्नै देशमा दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि प्रतिकारको निति अपनाएको छैन अहिले सम्म । आखिर यो कहिले सम्म रु कहिले सम्म हामी शासित हुनु पर्ने आफ्नै जन्म थलोमारु के शाशक बर्ग र हामीहरुको रगतको रंग भन्नछ की रु नत्र होईन भने नाकको आकर हेरेर गरिन्ने ब्याबहार कहिले सम्म ?
हामीले आश गरेको थिऔ २४० वर्षको शाहहरुको पतन पश्चात सबै नेपाली नागरीकहरुले सामान अधिकार पाउनेछ, सबैको पहिचान स्वीकार गरिनेछ तर यहाँ त उल्टो पो भै रहेको छ । हिंजो आन्तरिम संबिधान मै घोश्राणा गरिएको संघियतालाई अहिले संस्थागत गर्नुको सट्टा एक पछि अर्को खेल भै रहेकोछ जनतालाई अधिकार दिन नचाहनेहेरुले ६२ र ६३ को जनआन्दोलनको ले दिएको म्यान्डेट भुलेर । ठुला पार्टीका नेता भनाउदाहरु उही पुरानो सोचले ग्रसित छन मानौ अझै परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन उनिहरु । अझै पनि आफ्नै हाली मुहाली कायम गर्ने घृणित खेलमा लागेकाछन उनिहरु ।
लगभग ८०-८५% जनताहरुलाई राज्यको मुलधार बाट बन्चित गरीएको अवस्थाछ, सरकार र कर्मचारीको त कुरै नगरौ, राजनीतिक पार्टी अनि सन्चार माध्यमहरुमा पनि उनिहरु कै पकड़छ । मुस्किलले २३% भएकाहरुले देशको शासन, सरकारी कामकाज, न्यायलय, सेना र प्रहरहीको उच्च तहमा उनिहरुको ८६% उपस्थितिछ, त्यसैले त स्वच्छ ब्याबसाय र निष्पक्ष समाचार लेख्ने कलम पनि उही घृणित र सन्किर्ण मानसिकता बाट ग्रसितछ जुन कुरा में ७,८, र ९ मा आदिवासी जनजातीहरुको बन्दको बेला शिर्ष नेताहरुको भनाई र पत्रकारहरुका रूपधारण गरेका अहन्कारहरुको ब्याबहार बाट प्रष्ट भएकोछ । न्यायको लागी लड्छौ, बिभेद भयो, र समनाता हुनु पर्यो के भनेका थिए आदिवासीका नेतालेस् कलम चलाएर उजागर गर्ने बचन गरेका खकारले बोल्नै दिएन र हाम्रो आवज सुन्ने सम्म धैर्य गरेनन । के यो बिभेद होईन न रु अचम्मको कुरा के हो भने पश्चिममा अखण्डको नाममा १९ दिन बन्द हुँदा एउटा झिंगा मरेन रे, बन्द भब्य रूपमा सफल भयो र तर त्यही ठाऊमा आदिवासी थारुहरुको लाखौ जनताको सहभागिता भएको आन्दोलनको समाचार सम्म छापीएन अझ आदिवासीहरु को आम हड़तालमा बन्दसुरु अगाबाई काठमान्डू को गोदाममा आलु कुहियो रे १ अनि समाचारको शिर्षक पनि केवल भडकाऊपाराको मात्र । के यो सन्चार माध्यमले गरेको बिभेद होईन हामी माथी रु के हामी लाई बिभेदको बिरुद्द बोल्लने अधिकार सम्म छैन देशमा ?
भन्छन उनिहरु नै हामी सबै नेपाली, एक नेपाली, एक नेपाल अनि अखण्ड नेपाल रे १ सायद उनिहरुले भनेको अखण्ड उनिहरुकै हाली मुहाली, उनिहरु मात्रै हुनु पर्ने होला क्यारे १ नत्र संघीयता जस्तो समसामयिक माग र आवश्यकता लाई देश टुक्राऊन पाईन्न, संघियता चाहिन्न भन्नुको के अर्थरु अनि सदियौ वर्ष शोषित आदिवासीहरु लाई पहिचान देऊ भन्दा अत्तालिएर सामजिक सदभाब बिग्रियो रे, देश टुक्रिने भो रे १ नबुझ्ने ले त यी कुरा गर्छन नै तर प्रजातन्त्रको वाकलत गर्ने, उत्पीडनका बिरुद्द आवज उठाऊछौ भन्नेहरु नै आज आदिवासी, मधेसी र दलितहरुको बिरुद्द किन ? के प्रजातन्त्र उनीहरूले भनेको कुरा यस यस गर्दै गए मात्रै हुने हो ? गाई राष्ट्र जनवार हुनै पर्ने, अनि हिन्दु पर्वको मात्र मनोमानी हुनु पर्ने सायद यही होला उनीहरूले भनेको अखण्ड । ३८ प्रतिसत भन्दा धेरै जनसंख्या भएको आदिवासीहरुको त कुरै छैन, न राज्य ले सम्मान गरेको न मीडियाले लेखेकोछ । उल्टो बलबुताले भ्याए बिरोध गर्नमा खर्चेकाछन देशको ढीकुटी र पत्रकारका कलमहरु ।
अब तपाईहरु आफै भन्नु होस के यो सम्भबछ एउटा चक्का बिगारेर दौड जित्छु भन्नुरु यही कारणले आज प्रकृतिको सुन्दर देश र बिभिधताले भरी पुर्ण नेपाल बिकास होईन पछौटे पनमा गुज्रिराहेकोछ । कसरी सम्भव छ लंगड़ोले एक्लै हिमाल चढ़नु रु यही वास्तविकता लाई बुझेर आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिमहरुले अधिकार र पहिचानका कुरा उठाएका हुन । यथार्त पनि हो समाजमा सबै जात, धर्म र भाषाको समान रूपमा सहभागिता भयो भने त्यो समाज समृद्द र विकसित हुन्छ ।
अन्तमा लामो समय पश्चात बिभिन्न आरोह, अवरोह पार गर्दै नेपाल नया संबिधानको संघारमा आईपुगेकोछ । यस एकदमै सम्बेदनशील घडीमा नेपाल सरकार, शासक वर्ग, राजनितिक पार्टीहरु, स्वच्छ पत्रकारहरु र तमाम सजन नेपालीहरुलाई आवहान गर्द छु अब एकल सासन सम्भब छैन, यसले देशको भलो गर्दैन र देश झन झन उधोगतीमा लाग्ने हुँदा संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान मा आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिमहरुका पहिचानलाई सुनिस्चता गरियोस र नेपाल र नेपालीहरु लाई मुख र धम्कीले होईन स्वच्छ मन र भावनले एकता गरियोस तब मात्र हाम्रो देश नेपालको बिकास सम्भब छ, तब मात्र एकता र सदभाब सम्भब छ किन भने नेपाल ४ जात ३६ वर्णको फुलबारी मात्र होईन बरु बिश्वको सबै भन्दा धेरै आदिवासीहरुको थाक थालो हो नेपाल र शयौ जातिहरूको स्वाभिमान भएको देश हो हाम्रो नेपाल ।
Last Updated on Sunday, 27 May 2012 08:06
Last Updated on Saturday, 28 July 2012 14:48
नव आदिवासीहरुसंग केहि गन्थन मन्थन
मेकबहादुर पुन मगर
आदिवासी जनजाति महासंघले आव्हान गरेको नेपाल बन्दमा सञ्चारको माध्यमहरुमा आक्रमण भयो । पत्रकारका मोटरसाईकल, भ्यान, क्यामराहरु तोडिएको छ । राजधानी लगायत प्रमुख शहर मात्र होइन भित्रभित्रको गल्लीहरु पनि सबै बन्द छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पुर्व अखण्डको नाममा– ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी समाजले सुदुरपश्चिममा १९ दिने आन्दोलन गरेका थिए । त्यही हाराहारीमा त्यसै गरि थारुहटले पहिचान सहितको संघीयताको माग गर्दै सुदुरपश्चिममा नै आन्दोलन गरेका थिए । थारुहरुको आन्दोलनमा पुलिसले आक्रमण गरि कयौं आन्दोलनकारीहरु घाइते बनाए । राज्यले उनीहरुलाई दमन गर्ने प्रयास गर्यो । तर सञ्चार माध्यमहरुमा यसप्रकारको कुनै समाचार आएन । किन ? आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलन किन गरिराखेका छन् के पत्रकारहरुले समस्याको जड खोज्ने प्रयास गरेका छन् रु सबैले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए झैं गरेका छन् । आदिवासी जनजातिले पहिचानको आन्दोलन गरेका हुन् । यो देशमा हाम्रो पनि पहिचान कायम हुनु पर्यो, हामीले पनि अधिकार पाउनु पर्यो भनेर पहिचान र अधिकारको आन्दोलन गर्दा राज्यले दमन गरिरहँदा देशमा प्रकाशित हुने तमाम पत्रिकाहरुको कलम चलेको खोई रु ०६२–०६३ सालको आन्दोलन संघीयताको लागि पनि थियो । अहिले संघीयताको विपक्षमा लागेकाहरुलाई बिशेष प्राथमिकता साथ दिनदिनै अन्तरवार्ता लिइन्छ-प्रशारण गरिन्छ । के पत्रिका, टेलिभिजन, एफएमका माध्यमहरु सबै संघीयताको विरोध हुन् ? आदिवासी जनजाति संयुक्त वार्ता टोली र सरकारको बीच वार्ता हुँदा नेपाली कांग्रेस र एमाले संघीयता दिने पक्षमा नरहेको समाचार छ । यसर्थ पनि नेपाली कांग्रेसमा लागेका थारुहटका सुदुरपश्चिम क्षेत्रका २ सय जनाले पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा बुझाएका छन् । उनीहरुले बुझे होलान् नेका उनीहरुको पहिचान सहितको आन्दोलनमा बाधक छ भनेर यसैले पार्टीबाट राजीनामा दिएर पहिचान सहितको संघीयतामा आन्दोलनरत रहेको समाचार छ ।
हामी कुनै पार्टी, कुनै जाति र कुनै धर्मका होइनौं भनेर कुर्लने पत्रकार सबै कुनै पार्टी र नब्बे प्रतिशत पत्रकार उच्च जातिसँग सम्बन्ध छन् । उनीहरुले हामी निष्पक्ष छौं भन्नु थारुहट आन्दोलनको समाचार नआउँदा नै थाहा हुन्छ– उनीहरु कति निष्पक्ष रुपमा पत्रिका प्रकाशन गर्छन् भनेर । यस देशमा अहिले सबै भन्दा ठूलो पार्टी बनेको एनेकपा माओवादी अहिले प्रमुख रुपमा सत्तामा छ । हिजो पहाडका ती डाँडा डाँडा डुल्दा गरेका वाचाहरु उनीहरुलाई पुरा गर्नु पर्दैन ? यही पार्टीबाट भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका छन्– अहिले उनैले बाहुन क्षेत्रीलाई जनजाति बनाएर जनजातिको परिचय नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । यही पार्टीबाट अहिले शान्ति मन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझीले शहादत भएका ती सबैलाई बिर्सिसकेका छन् । हिजो पहाडको गोठ गोठमा बसेर चिउरा खाँदा तपाईको दाजुभाईले तपाईलाई कति साथ दिएका थिए र ? तपाईहरुलाई सत्तामा पु-याएको तपाईको दाजु भाईले हो र ? तपाईहरुको राजनैतिक धरातल यतिसम्म हो ?
यो देश पहिला राजा र राणाहरुले संचालन गरेकै हो । अहिले बाहुन र क्षेत्रीहरुले नै राज्य गरि आईरहेका छन् । सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु प्राय सबै बाहुन र क्षेत्रीहरु नै छन् । अनि हामी किन नभन्ने यो देश तपाईहरुले संचालन गरेको हो भनेर l तपाईहरुले संचालन गरेका देश असक्षम भईरहेको कुरा तपाईहरुलाई पनि रामै्रसँग थाहा होला । यसर्थ फरक तरिकाले संचालन गर्न आजको आवश्यकता हो । ०६२–०६३ सालको आन्दोलनले संघीयतामा जाने भनेर म्यानडेड दिएकै छ । तर किन फेरि केन्द्रीकृत शासनकै पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ रु किन फेरि अखण्डको नाममा राम्रो राम्रो नारा राखेर भ्रम फैलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । तपाई आफुहरुले हाम्रो इतिहास नेपालमा ९ सय वर्षको हो भनेर लेखेकै हो । अब अहिले बाहुन क्षेत्री पनि जनजाति हो भनेर १ दिनको के आन्दोलन घोषणा भएको थियो– सरकारमा भएका उनीहरुकै सहोदर दाजुभाईहरुले वार्तामा बोलाएर जनजाति हो भनेर आफ्नो माग पुरा गराई हाले । आदिवासीले गरेको वर्षौसम्मको आन्दोलनको उनीहरुलाई कुनै महत्व भएन आफ्नो दाजुभाईले घोषणा गरेको आन्दोलनको १ दिन नबित्दै उनीहरुलाई जनजाति बनाउने ?
अचम्म छ, के यिनीहरुलाई आदिवासी जनजातिको अन्तराष्ट्रिय नियम लाग्दैन । नेपालमा बसेका आदिवासी जनजातिले के आफैले आफैलाई हामी आदिवासी जनजाति हौं भनेर घोषणा गरेका हुन् र ? अन्तराष्ट्रिय रुपमा आदिवासी जनजाति हुनको लागि नियम बनाईएको छ । यो प्रावधान पुरा गरे त सरकारले किन घोषणा गर्नु पर्छ– बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी जनजाति हुन् भनेर अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै तपाईहरु पनि आदिवासी जनजाति भयौं भनेर अन्तराष्ट्रियकरण गरिहाल्छ नि बाहुन क्षेत्रीले के यसरी दुनियाँ हँसाएका हुन् । आफैले आफैलाई नेपालमा आएको ९ सय वर्ष भो पनि भनेर पनि लेख्ने अहिले फेरि हामी जनजाति हौं भनेर आफै आफै वार्ता गरेर घोषणा पनि गर्ने ?
नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई युएनको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा नेपालमा जनजाति नै छैनन् भनेको हिजै हो, पछि वाक्य सुधार गर्दै ५ हजार जति छन् भनेर फर्केको पनि धेरै समय भएको छैन । आज उनै कृष्णप्रसाद भट्टराईको दाजुभाईले आफैलाई हामी जनजाति हौं भनेर घोषणा गर्छन् । होइन हिजो आदिवासी जनजाति नै छैनन् भन्ने जातिले जनजाति भित्र के देखें हौं अनि आफैंले आफैलाई जनजाति हौं भनेर घोषणा गर्न भ्याए । आदिवासी जनजातिले अधिकारको लडाई लडिरहँदा उनीहरुलाई अधिकार चाहिं नदिने, बरु आन्दोलन दबाउने अहिले झन आफै–आफै मिलेर हामी पनि जनजाति भयौं भनेर घोषणा गर्ने ? होइन विश्वमा बसोबास गर्ने मान्छेहरुलाई के सारो अबुझ ठान्न खोजेका हुन् यी उच्च जाति भनाउदाहरुले । विश्वका आदिवासी जनजातिलाई नेपालमा झैं थिचोमिचोमा पारिराख्नको लागि तपाईहरुले चलेको यो नयाँ चालको सलाम गर्नै पर्छ । यसर्थ भर्खरै एक दिने आन्दोलन गरेर जनजाति बनेका बाहुन क्षेत्रीले त झन यो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा भरपुर साथ देला भन्दा झन आन्दोलनमा लागेका आन्दोलनकारीहरुलाई पत्रिकाको आड लिएर उही तपाईहरुको पुरानो प्रवृति देखाउँदै जिस्काउने, समाचार सम्प्रेषणमा आफैले बञ्देज लगाउन थालेपछि स्वभाविक रुपमा सञ्चार माध्यम माथि आक्रमण भयो । यसो हुनमा वर्षौ देखिको दमनकै कारण पनि हो ।
जब दमनले सिमा नाघ्छ, वैज्ञानिक नियम नै हो– त्यहाँ विष्फोट हुन्छ ।
यो आदिवासी जनजातिको सहनशिलताको रुपले मात्र गर्दा हो त्यति विघ्न बिग्रिएको केही छैन । आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा वकालत गरौं । नेपाल हामी सबैको हो भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ, तर पहिचान र अधिकार नपाउँदाको लोकतन्त्रको आयु पनि त लामो हुँदैन । यसर्थ लोकतन्त्रमा सबैले समान अवसर र समान हक प्राप्त गरि बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने माग त नाजायज छैन होला नि । यसर्थ दिगो लोकतन्त्रको लागि आदिवासी जनजातिको मागको समर्थनमा सबैले आवाज बुलन्द गरौं । अखण्डको नाममा संघीयता विरोधहरुको कुरा नआओस् । पत्रिका, टेलिभिजन र एफएम माध्यमहरुमा हाम्रो आवाज हामीले भने जस्तै गरि आओस् । संघीयताको पक्षमा आओस् । जय आदिवासी जनजाति ।
Last Updated on Wednesday, 23 May 2012 15:08
Last Updated on Thursday, 03 May 2012 06:45
"बाहुन र बाहुनबादीहरूले मुलुकमा परिवर्तन चाहेका छैनन् "
राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा
वर्ग र जातिलाई हेप्ने हतियार भनेकै जातीय अहंकारवाद हो
सेनाका पहिलो जनरल अभिमानसिँह राना मगरलाई मार्ने मगर नै थिए